Tsanangudzo:Solar Energy Polycrystalline Silicon Cell Panel,Kaya Power Generation System Components,Laminated Solar Panels
Solar Energy Polycrystalline Silicon Cell Panel,Kaya Power Generation System Components,Laminated Solar Panels
Home > Products > Solar Module &amp; Panel > Polycrystalline Solar Panels > 60W Polycrystalline Silicon Solar Panels
Solar energy polycrystalline silicon cell panel ndiyo chizvarwa chitsva chemasero ezuva, ane zvikomborero zvekushanduka kwakanaka kwehutano, hupenyu hwakareba hwe monocrystalline silicon masero uye nyore nyore kugadziriswa kweamorphous silicon yakaoma firiri bateri zvinhu.
1. Girazi: Ultra-white textile tempered girasi, kukwana 3.2 mm, mumhinduro yekuonekwa kwezuva rinoshandiswa kwezuva rekuyera (320-1100 nm) kutumirwa kwepamusoro ne 91%, kusingapindirwa nemirairo ye ultraviolet, kutumira kwacho hakuregi. Izvo zvikamu zvegorozi rakaoma zvinogona kumira zvakakonzerwa nehupamhi hwe25 mm ice hockey pa 23 m / s.
2. EVA: Mhando yepamusoro yeEVA mafirimu ane uwandu hwe 0.5mm inoshandiswa sechisimbiso chemasero ezuva uye kubatana kweEVA film negirazi uye TPT. Inoshandiswa zvakanyanya uye kupesana nekukwegura. Izvo zvinoshandiswa zveEVA mafirimu mushure mekuvhara kwemasero masero ndeaya anotevera: kutumirwa kunopfuura 90%; kudarika kwepabonde kunopfuura 65-85%; kuongorora simba (N / cm), girazi / firimu inopfuura 30%; TPT / firimu inopfuura 15%; kutonhora kwakakwirira: 85 degrees, kutsika kwakadzika 40 degrees.
3TPT: solar cell back, anti-aging, anti-corrosion, anti-ultraviolet miyero, kusvibiswa kwemhepo uye zvimwe zvinodiwa.
4. Chimiro: aluminium alloy frame, simba guru, simba rakasimba kusagadzikana.
5. Girasi yekamuri inokwanisa kukwanisa kuzvichenesa, izvo zvinoita kuti zvigone kushandiswa kweguruva chizvarwa chinoshandisa simba rekugadzira simba.
Maererano nezvinodiwa nevatengi, kubudiswa kwemasviniro ezuva kunosangana nevanhu vanoda, zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya, magetsi ezuva, magetsi ezuva, magetsi emagetsi ezuva, magetsi emagetsi ezuva, nezvimwewo, asiwo kugadzirisa zvinodiwa yevatengi kune zvigadzirwa zvakasiyana.